China amagilavu ​​Ukukhiqiza futhi Factory | Yiwu Shunshui
Umsebenzi awumisi nje ngoba izinga lokushisa lehla, kepha ngaphandle kwamagilavu ​​afanele, kungaba buhlungu kakhulu ukuqedela umsebenzi emakhazeni. Ngenxa yokufakwa, ukumbozwa okungangeni manzi nokuguquguquka okukhulu kwemigilavu ​​yomsebenzi wasebusika omuhle kakhulu, amathuluzi abandayo neminwe elukhuni ngeke kube yinkinga. Ngakho-ke, ngicela ugcine iminwe yakho bese uthwala la magilavu ​​ukuphatha izinto:
Amagilavu ​​omsebenzi wasebusika ahlukile kumagilavu ​​ovame ukuwasebenzisela ukuhlobisa imvelo neminye imisebenzi yesimo sezulu esifudumele. Kumele bahlangabezane nazo zonke ezinye izidingo ukuvimbela ukungaphatheki kahle nokulimala. Lapho uthenga amagilavu ​​omsebenzi wasebusika omuhle kakhulu, izinto ezilandelayo ezibalulekile zidinga ukucatshangelwa.
Umsebenzi wasebusika ngokuvamile usho ukulungiswa kwemishini ephuthumayo noma ukususwa kweqhwa, kepha kungafaka nemiklamo ehlukahlukene ongenaso isikhathi sayo phakathi nezinyanga ezinzima. Uma ufuna ukulungisa ngomshini, amagilavu ​​omsebenzi wakho kufanele aguquguquke ukuze iminwe yakho ikwazi ukubamba kalula i-hardware encane. Kumele futhi zibe mncane ngokwanele ukuze zikwazi ukungena ezindaweni eziqinile, njengamakamelo ezinjini ezibekelwe imingcele. Ukususwa kweqhwa neminye imisebenzi enezidingo zobuchwepheshe eziphansi, amagilavu ​​omsebenzi kufanele aqine futhi angangeni manzi ukugcina izandla zomile futhi zifudumele. Umsebenzi obalulekile ukuvikela iqhwa ekungeneni ku-cuff yesihlakala.
Izinto ezisetshenziswa kumagilavu ​​womsebenzi wendabuko kanye nendabuko zivame ukwehluka kakhulu. Izinto zokwenziwa (njengeyiloni, i-spandex, ne-polyester) zivamile kumagilavu ​​womshini. Lezi zinto zinzima, azinamanzi, zilula futhi mncane ukuhlinzeka ngokuguquguquka futhi zilungele ukubekwa ezindaweni ezincane. Kwamanye amaphrojekthi, amagilavu ​​asindayo enziwe ngesikhumba esigaxekile asakaza ukushisa ngaphakathi, kanti ingaphandle ligcinwe libanda futhi lingenamanzi. Zingase zifakwe ngisho noboya ukuze zigcine ukushisa okuphezulu kakhulu. Ziminyene kunamagilavu ​​we-manipulator futhi zilungele imisebenzi yangaphandle ngaphandle kokukhanya okuncane.
Ufuna induduzo efanelekile nokusebenza. Ukuzama ukuqedela iphrojekthi ngamagilavu ​​amakhulu kakhulu imvamisa kuyize. Ngaphezu kwalokho, njengoba izinto eziningi zokushisa ezishisayo zibamba ukushisa komzimba womuntu ngamaphakethe omoya, amagilavu ​​amancane kakhulu angakhama amaphakethe omoya, ngaleyo ndlela anciphise ukugcinwa kokushisa.
Abakhiqizi abaningi banikeza amashadi osayizi ukukusiza ukhethe amagilavu ​​asebusika amahle kakhulu esandleni sakho. Lokhu kuyasiza ngoba usayizi ungahluka kusuka kumkhiqizi kuye kumkhiqizi. Ungaba nendawo komunye umkhiqizo nasendaweni ephakathi kolunye uhlobo lomkhiqizo. Ungasebenzisa amatafula wosayizi ahlukahlukene ukukala isandla sakho bese unquma ukuthi usayizi omncane, ophakathi noma omkhulu ulungele uhlobo oluthile lomkhiqizo.
Amagilavu ​​anolwelwesi olulodwa kuphela alukwazi ukuvikela izandla zakho emazingeni okushisa abandayo noma emoyeni, eqhweni noma emvuleni. Amagilavu ​​omsebenzi asebusika angcono kakhulu kufanele abe nezendlalelo eziningi zezinto zokwakha, ezingasebenzisana ukuze zifudumale.
Igobolondo langaphandle elenziwe ngesikhumba noma ngezinto zokwenziwa lingavikela izandla ekuklwebhekeni nasekulimaleni, kanti futhi livimbela umoya namanzi ukungena. Ngaphakathi, ungqimba loboya, uboya noma i-polyester ukwahlukanisa kusiza ukugcina ukushisa komzimba nokugcina kufudumele. Kuze kube manje, uboya bungezinye zezinto ezingcono kakhulu zokufakwa emgodini. Ngisho nasezimweni ezimanzi, uboya bungagcina ukushisa, okusho ukuthi umjuluko ngeke uthinte ukunethezeka kwakho. Uboya buncane kakhulu, ukusebenza kwabo kufana noboya, kepha ukusebenza kahle kuphansi. I-Polyester iyona engasebenzi kahle kulezi zindlela ezintathu.
Uma izandla zakho zimanzi te ngezithukuthuku ezivela kugilavu, iglavu lingalahlekelwa yilo lonke inani lalo lokuvikela. Amagilavu ​​anokuphefumula okuncane avimbela izandla ukuthi zishise kakhulu, okuvumela umoya oshisayo ukuba uphume ngenkathi ugcina ukushisa okunethezekile. Imicu yemvelo njengoboya iphefumula ngaphezu kwezintambo zokwenziwa. Amagilavu ​​esikhumba noma e-rawhide anenayiloni ngemuva ahlinzeka ngezinga elithile lokuphefumula ngaphandle kokuvezela sonke isandla sakho ezintweni ezahlukahlukene.
Amagilavu ​​omsebenzi wasebusika kumele angangeni manzi. Ngaphandle kokufaka izandla zakho emazingeni okushisa abandayo, ayikho enye indlela yokulimaza isikhumba sakho, iminwe, ukuphela kwezinzwa nokuguquguquka. Amagilavu ​​anerabha angavimbela amanzi ukuthi angene, ngakho-ke yize engaphefumuleki, ayisinqumo esihle kakhulu lapho esebenza emvuleni naseqhweni. Izinto zokwakha ezingangeni manzi ngokwemvelo (njengesikhumba nezikhumba) zingelashwa ngezifutho ze-silicone nezithasiselo ukwakha ungqimba lwamanzi agobhozayo, okwenza kungangeneki.